တော်ရုံယောကျာ်းလေးတွေ လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကို လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ လုပ်ပြသွားလိုက်တဲ့ ပိုပိုရဲ့ အံ့ဖွယ်ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
တော်ရုံယောကျာ်းလေးတွေ လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကို လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ လုပ်ပြသွားလိုက်တဲ့ ပိုပိုရဲ့ အံ့ဖွယ်ဗီဒီယိုလေး
ပိုပို က တော့ သီချင်း အဆိုကောင်း သလို ရုပ်ရည်လေး ကလည်း ချောမော လှပတာကြောင့် ဝန်းရံ အားပေး သူတွေ များပြား နေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပိုပို က တေးသီချင်းပေါင်း မြောက်များစွာ ကို သီဆို ခဲ့ပြီး သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း သီချင်း တွေ ရေးစပ် လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပိုပိုက လက်ရှိ မှာ လည်း ပရိသတ် တွေအတွက် ရသမျိုးစုံ ပေးနိုင်မယ့် သီချင်း အသစ်တွေ ကို ဖန်တီးနေ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
ပိုပို က လူငယ် ဆန်ဆန် လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ နေထိုင်တတ် သူလေး ဖြစ်ပြီး ခေတ်မှီ လှပတဲ့ ဖက်ရှင် လေးတွေကို ဝတ်စား ဆင်ယင်လေ့ ရှိတာ လည်း တွေ့ရပါ တယ် ။ ဒါ့ အပြင် ပိုပိုက အမြဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တာ ကြောင့်ပရိသတ်တွေက အချစ်ပို နေရတာလည်း ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လည်း အမြဲ ဖော်ပြလေ့ရှိ တာဖြစ်ပါ တယ် ။
အခုမှာ တော့ ယောကျာ်းလေးတွေတောင် လုပ်ရန် မလွယ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေး ကို အလွယ်တကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ပြထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဗီဒီယိုလေး ထဲမှာ ပိုပို တစ်ယောက် ခက်ခဲတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ကြိုးကြိုး စားစား လုပ်နေတာ တကယ် ကို ချီးကျူး စရာပါနော် … . ပရိသတ် ကြီးအတွက် ပိုပိုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မျှဝေပေး လိုက်ပါရစေ … .
ပိုပို က ေတာ့ သီခ်င္း အဆိုေကာင္း သလို ႐ုပ္ရည္ေလး ကလည္း ေခ်ာေမာ လွပတာေၾကာင့္ ဝန္းရံ အားေပး သူေတြ မ်ားျပား ေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပိုပို က ေတးသီခ်င္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ကို သီဆို ခဲ့ၿပီး သူမ ကိုယ္တိုင္လည္း သီခ်င္း ေတြ ေရးစပ္ ေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပိုပိုက လက္ရွိ မွာ လည္း ပရိသတ္ ေတြအတြက္ ရသမ်ိဳးစုံ ေပးနိုင္မယ့္ သီခ်င္း အသစ္ေတြ ကို ဖန္တီးေန တာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
ပိုပို က လူငယ္ ဆန္ဆန္ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးစြာ ေနထိုင္တတ္ သူေလး ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မွီ လွပတဲ့ ဖက္ရွင္ ေလးေတြကို ဝတ္စား ဆင္ယင္ေလ့ ရွိတာ လည္း ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ ဒါ့ အျပင္ ပိုပိုက အျမဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တာ ေၾကာင့္ပရိသတ္ေတြက အခ်စ္ပို ေနရတာလည္း ျဖစ္ၿပီး သူရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေလးေတြ ဗီဒီယိုေလးေတြကို လည္း အျမဲ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ တာျဖစ္ပါ တယ္ ။
အခုမွာ ေတာ့ ေယာက်ာ္းေလးေတြေတာင္ လုပ္ရန္ မလြယ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေလး ကို အလြယ္တကူနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ျပထားတဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုေလးကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဗီဒီယိုေလး ထဲမွာ ပိုပို တစ္ေယာက္ ခက္ခဲတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြကို ႀကိဳးႀကိဳး စားစား လုပ္ေနတာ တကယ္ ကို ခ်ီးက်ဴး စရာပါေနာ္ … . ပရိသတ္ ႀကီးအတြက္ ပိုပိုရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို မၽွေဝေပး လိုက္ပါရေစ … .
Previous post အတူနေ(Living Together)ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး များနားလည်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း
Next post ရေထဲကထွက်လာပြီး အရမ်းမိုက်တဲ့ ဆက်ဆီဒန့်လေးကို အလန်းစားလေးစွဲပြလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်